१८० वर्ष बाँचिने दाबी गर्दै यी व्यक्तिले शरीरबाट स्टेम सेल निकालेर पुनः ट्रान्सप्लान्ट गराए – NepalajaMedia
१८० वर्ष बाँचिने दाबी गर्दै यी व्यक्तिले शरीरबाट स्टेम सेल निकालेर पुनः ट्रान्सप्लान्ट गराए
March 7, 2021 205
अमेरिकी व्यापारी तथा न्यूयोर्क टाइम्सका बेस्टसेलिङ राइटर डेव एस्प्रले आफ्नो शरीरको बोन म्यारोबाट स्टेम सेल निकालेर यसलाई पुनः ट्रान्सप्लान्ट गराएका छन् । शरीरको बायोलोजिकल क्लकलाई उल्टो घुमाउनका लागि गरिएको यो बायोह्याकिङमार्फत् उनी १८० वर्षसम्म बाँच्न चाहन्छन् । यो तरिका भविष्यमा मोबाइल फोनको झैं चलनमा आउने उनले दाबी गरेका छन् । ४७ वर्षका डेव सन् २१५३ सम्म बाँच्न चाहन्छन् । यसका लागि उनी कोल्ड क्रायोथेरापी चेम्बर र इन्टरमिटेन्ट फास्टिङको तरिका पनि अपनाइरहेका छन् । डेवका अनुसार ४० वर्षभन्दा कम उमेर भएकाहरुले यो तरिका अपनाएको खण्डमा उनीहरु सय वर्षमा पनि खुसी र अत्यधिक सक्रिय रहन सक्छन् ।
डेवले अहिलेसम्म यो प्रविधिमा ११.८६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् । उनी यसो गरेर शरीरको पूरै प्रणालीलाई उत्कृष्ट बनाउन चाहन्छन् । उनी भन्छन्, ‘मैले खानामाथि नियन्त्रण गरेर, सुत्ने थरिका परिवर्तन गरेर र बुढेसकाल रोख्ने तरिका अपनाएर आफूलाई यस्तो बनाएको छु कि शरीरमा निकै कम जलन (इन्फ्लेमेशन) होस् ।’ स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्ट गराउने बारे डेव भन्छन्, ‘जब हामी जवान हुन्छौं, शरीरमा करोडौं स्टेम सेल हुन्छन् । जसरी उमेर बढ्दै जान्छ, स्टेम सेल नष्ट हुन थाल्छ । त्यसैले म इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ) (अन्तरालमा भोजन र ब्रत) अपनाउँछु । यस्तोमा जब शरीरले खाना नपचाइरहेको अवस्थामा यो आफैं मर्मत भइरहेको हुन्छ ।’
क्रायोथेरापी कोल्ड थेरापीको नामले पनि परिचित छ । यो शरीरको क्षति ग्र स्त तन्तुलाई कम तापक्रममा उपचार गर्ने प्रक्रिया हो । रोचक कुरा के छ भने हार्वर्ड युनिभर्सिटीका वैज्ञानिक मार्क एलनले स्टेम सेलसँग उमेरसँग जोडिएको जटिलतालाई कम गर्नका लागि कम्पनी बनाएर काम सुरु गरिसकेका छन् । हार्वर्ड कै स्टेम सेल एण्ड रिजनरेटिव बायोलोजीका प्राध्यापक एमी वेगर्स पनि यसबारे अनुसन्धान गरिरहेकी छिन् र प्रोटिनले कसरी उमेर परिवर्तन गर्छ भन्ने बारे जानकारी लिइरहेकी छिन् ।
१७ वर्ष अघि तिब्बतमा ट्रेकिङ गर्दा जब डेवको स्वास्थ्य बिग्रियो तब उनलाई चौरीको दुधको चिया खुवाइएको थियो । यसले उनलाई नयाँ ऊर्जा प्रदान गरेको महसुस भयो । यसै आधारमा उनले अमेरिकामा बुलेटप्रुप कफी लञ्च गरे । यो एमसीटी तेल र नौनीबाट बनाइन्छ । यो बिहान पिउँदा तौल कम हुन्छ । डा. ट्रुडी डिकिनका अनुसार एक कप सामान्य कफीमा ५ सय क्यालोरी हुन्छ । बुलेटप्रुफ कफीमा कार्बोहाइड्रेट हुँदैन । यसले इन्सुलिनलाई प्रतिक्रिया गर्न दिँदैन र मेटाबोलिजम बढाउँछ । यसमा भएको तेलले बोसो कम गर्न मद्दत गर्छ ।
Prevयीनै हुन् सुत्केरी अवस्थामा २ पटक अपरेशन हुँदा ज्यान गुमाउने २४ वर्षिया अनिशा, बच्चाको बि’चल्ली
Nextकर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई के भयो ? काठमाडौंको ह्याम्स अस्पतालमा उपचार हुँदै